Yekupedzisira Epoch: ine chigamba chitsva v0.8 nekuvandudza uye zvimwe ... uye kugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Yekupedzisira Epoch: ine chigamba chitsva v0.8 nekuvandudza uye nezvimwe ...
Nguva yekupedzisira inouya neshanduro ine chigamba Rogue Patch 0.8 yekirasi yazvino yemutambo wevhidhiyo uyu unowanikwa yeWindows uye GNU / Linux. Iyo yekuvandudza Eleventh Hour Mitambo akashanda kuti awane idzi nhau, uye ikozvino unogona kuwana zvese nezvakakosha dhisikaundi (-20%) pachitoro cheValve's Steam. Uye zvakare, iwe uchaona kuti iwo mutambo wevhidhiyo ine yakanaka kwazvo makomendi, saka zviriko zviripo ...
Kana iwe usati uchimuziva, iwe unofanirwa kuziva kuti Yekupedzisira Nguva ndeye kutamba-mutambo wevhidhiyo iyo inosanganisawo chiito uye yakafanana nemavhidhiyo evhidhiyo senge ngano saDiablo anogona kuva. Uye ikozvino, iwe unenge uine izvo zvekuwedzera neyekupedzisira yekutamba hunhu Rogue nechikamu ichi 0.8, kwaunofanira kuwedzera mamwe mana mana akasarudzika mavara akange atovepo. Hunhu hutsva hune humwe hunoshamisa hweuta uye mapfumo matarenda, anozove aunofarira zvechokwadi.
Uyewo, Rogue nevadzidzisi vake vaviri, Bladedancer naMarksman, zvakare kutanga ne17 mitsva kugona. Unogona kuona zvese izvi zvirinani muvhidhiyo yekusimbisa iyo yakatumirwa paYotube:
Kuwedzera kune izvo zvigadziriso, iwe zvakare uchawana zvimwe sekubata zvakapetwa kaviri, uta, vanobata miseve nemapanga, nzvimbo yetemberi yeEterra (inonyanya kufadza kusvika nhasi), uye webhusaiti nyowani ine rumwe ruzivo.
Iwe unogona zvakare kuwana izvi wechipiri teaser pane yekupedzisira Epoch kugadzirisa kuri kuitika:
Pasina kupokana, yaive yatove RPG chiito chakanyatso kukosheswa neavo vakachiedza, uye ikozvino zvinouya neaya matsva kuti zviite kuti zvikure zvakare. Inzvimbo yedhijitari kwaunogona kunakidzwa uye kupedza maawa uchitarisana neumambo hwakasviba uye vanamwari vane hasha, nehondo dzinotyisa.
Nguva yekupedzisira inomiririra iyo musanganiswa wakakwana nguva yekufamba, matorongo, uye kugona kugadzirisa mavara semamwe mitambo yekutamba ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Yekupedzisira Epoch: ine chigamba chitsva v0.8 nekuvandudza uye nezvimwe ...
Steam: Valve mutengi ikozvino nePS5 controller rutsigiro